အကောင်းစား ထိုင်းအစားအစာများရနိုင်တဲ့ 2017 BEST THAI ဆုရဆိုင် | Warmae.com Blog
warmae.com can find the next dishes for you
အကောင်းစား ထိုင်းအစားအစာများရနိုင်တဲ့ 2017 BEST THAI ဆုရဆိုင်
Posted	on	 ဒီဇငျဘာ 13, 2017 by	Saw Wunna /0Comment
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အစားအစာတွေက မြန်မာပါးစပ်နဲ့ သိပ်မစိမ်းတဲ့အစားအစာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ချဉ်ချဉ်၊ စပ်စပ်အရသာပိုကဲထားတဲ့ ထိုင်းရိုးရာအစားအစာတွေကို တော်တော်များများ ကြိုက်ကြတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာ ထိုင်းစာဖိုမှုးတွေကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ရောင်းချနေတဲ့ ထိုင်းစာစစ်စစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အကြောင်း ပြောပြချင်တယ်။
Royal Jasmine Authentic Thai Cuisine ဆိုတဲ့ဆိုင်က 2017 BEST THAI ဆုရခဲ့တဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအားလုံးကို ready made မသုံးပဲ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဟင်းပွဲတချို့က ဈေးတော့ နည်းနည်းလေးမြင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စားပြီးတဲ့သူတိုင်းက ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တဲ့ အရသာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုရတယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုခြင်းခံရတဲ့ဆိုင်ပါ။
ထိုင်းအစားအစာတွေအပြင် ဒီဆိုင်မှာ စားလို့ကောင်းတာက သဘာဝအသီးစစ်စစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့
Squeeze Juice၊ Mix Squeeze Fruit Juice နဲ့ Thai drink တွေကလည်း ဆိုင်တိုင်းမှာမရနိုင်ပါဘူး။အဓိကဟင်းပွဲတွေအပြီးမှာ စားလို့ရတဲ့ Khao Knyo Sangkaya၊ Lod Chong ဆိုတဲ့ ထိုင်း dessert တွေလည်း စားလို့ရနိုင်ပါတယ်။
View all posts by Saw Wunna →
Warmae.com is Myanmar based dish finding website. Please visit our official website.
ရန်ကုန်က လူသိနည်းသေးတဲ့ အမိုက်စားဘားတစ်ခု ဒီတစ်ခေါက်မှာ လူသိနည်းသေးတဲ့ အမိုက်စားဘားတစ်ခုအကြောင်းေ...
စီလုံတီးသောက်ချင်တယ်ဆိုရင် လဘက်ရည် တစ်ခွက်သောက်လိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိတယ်ဆိုတဲ့ မ...
ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ မြောက်ဥက္ကလာက ပင်လယ်စာနဲ့ ဟော့ပေါ့ဆိုင် ပင်လယ်စာနဲ့ ဟော့ပေါ့ကောင်းကောင်းစားလို့ရပြီး ဈေးနှုန်းခ...
တစ်ချောင်း ၁၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချပေးနေတဲ့ ငရုတ်သီး ၀က်သားတုတ်ထိုးဆိုင် ဒီတစ်ခေါက်မှာ ဝက်သားတုတ်ထိုးကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် အသစ်စက်...
ကြည့်မြင်တိုင်က လက်ခ်ျမီး ချစ်တီးထမင်းဆိုင် စားခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်တီးဆိုင်တွေတော်တော်များများထဲမှာ စေတနာ...
Bagan Buffet Cafe Food Court Italian Korean mohinga Myanmar Traditional Food Pizza takumiya Thai
© 2021 Warmae.com Blog